नेकपा विवाद टुंग्याउँन निर्वाचन आयोग, के-के भन्छत? - Babal Khabar
१७ फागुन, काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’
‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु । केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै हो भन्ने फैसला हुन्छ । यसमा एक इन्चपनि शंका गर्नु पर्दैन’ उनले अघि भने ।
के प्रचण्डले भने जस्तो निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिता विवादमा निर्णय गर्दैछ त ?
आयोग स्रोतका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले २० माघमा दिएको निवेदनबारे छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो दुई दिनयता तीन विकल्पमा लगातार छलफल भइरहेको छ, तर आयुक्तहरु कुनै टुंगोमा पुगेका छैनन् ।
पहिलो : हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने ।
दोस्रो : विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने ।
तेस्रो : विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने ।
आयोग स्रोतका अनुसार अर्को विकल्प आयोगले माघ ११ मा गरेको निर्णयको प्रतिउत्तरमा निवेदन आएकाले विवादमा प्रवेश गर्ने र निर्णय दिने छ । यो विकल्पमा गयो भने ऐनअनुसारका प्रक्रिया पूरा गरेर ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ, त्यसलाई नै आधिकारिकता दिनेछ ।
अर्को विकल्प भने विवादमा प्रवेश गर्ने, तर अल्पमत बहुमत हेरेर कुनै एउटा पक्षलाई वैधानिकता नदिने छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो विकल्पमा ऐनको दफा ४४ अनुसार विवादमा प्रवेश गरेर दुबै पक्षलाई बोलाएर मिल्न अनुरोध गरिनेछ ।’
Prevआयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनः बढयो ।।
nextपूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए